Iileta eziVuthayo zoMatshini wokuGcina ileta
Umvelisi weeleta ngasemva
NgoJanuwari 1, 2021 0 IiCententarios 586
Umvelisi weeleta ngasemva. ukuba fumana imithombo eyahlukeneyo Kwi-Instagram, vula usetyenziso, bhala okanye uncamathisele isicatshulwa sakho, uyijonge ngeendlela ezahlukeneyo, ukope isicatshulwa kunye nefonti oyifunayo kwaye uncamathisele isicatshulwa kuyo I-Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, Twitch, TikTok okanye nayiphi na inethiwekhi yoluntu. Kukho ezinye iisayithi ezibonelela ngenkonzo.
Nangona kunjalo, kukho izixhobo zomntu wesithathu ezibonelela ngeendlela zabasebenzisi ukuba bathumele eminye imithombo. Qhubeka nathi ukwazi okungakumbi ngale ndlela kwaye ufunde indlela yokwenza sebenzisa iifonti ezenza ukuba upapasho lwakho lube nomtsalane ngakumbi, kule meko iileta ezivelisa iileta.
Umvelisi weeleta ngasemva. Ukuba ufuna ezinye iinketho kwisicatshulwa esihonjisiweyo, nje cofa "layisha iifonti ezininzi". Izinketho ezibonakala apha zinokungacwangciswanga, zisuka kancinane kumgangatho odibeneyo kunye nezixhobo ezinokungafani kangako, i-emojis kunye neesimboli.
[Iileta ezivelisa iileta] How️ Ungazisebenzisa njani iifonti zesiko?
-Umatshini wokukhuphela iileta Kuya kubakho indlela yokongeza oonobumba abathandwayo abalinganiswa abakhethekileyo, kunye nee-emojis kunye nezinye iisimboli. Ukuziqhelanisa, zibonakala njengamagama esiko, kodwa ngokomsebenzi zibizwa njalo Iimpawu ze-Unicode.
Umvelisi weeleta ngasemva. Kumnandi njengoko zinjalo, ukunxiba zona kakhulu kunokunika umbono wokuba iakhawunti yakho ayiqhelekanga.
Umvelisi weeleta ngasemva. Siza kukubonisa inyathelo ngenyathelo, Onke amaphepha alo mxholo alandela ukusebenza okufanayo. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba ukhethe nayiphi na kuzo, kwaye umahluko ngokunxulumene nezigaba uya kuba mncinci.
Umvelisi weeleta ngasemva. Khumbula ukuba ukungangqinelani komlinganiswa othile we-Unicode kunokwenzeka. Ke, qinisekisa ukuba i-snippet ibonakala njengoko bekucetyiwe Kwaye ukuba kunjalo, lungelelanisa ukuze ungothusi abalandeli bakho.
Umenzi weeleta ezantsi
Umvelisi weeleta ngasemva. Wakhe wazibuza ukuba abasebenzisi bongeza njani Imithombo ebonisiweyo kwiinethiwekhi zabo zentlalo? Ukuba ubuzile I-Instagram, i-Twitter, i-Fb, i-WhatsApp okanye iTok Tok phakathi kwezinye, uyazi ukuba ayinazindlela zininzi onokukhetha kuzo xa kufikwa kumba wokwenza iileta okokoko bekubhalwe i-biography, amagqabantshintshi, iintloko, njl njl. ube nefonti emiselweyo.
Akukho zikhetho zokwenza ngokwezifiso kwaye uhlele ukuzenza zibenomdla ngakumbi, ngokweminqweno yakho, khululeka nje! Usenokusebenzisa umvelisi weeleta ngasemva ngendlela emnandi nenomtsalane koku umvelisi.
Ator Umatshini wokuvelisa iileta ngasemva, iifonti kunye nohlobo lohlobo
Sebenzisa iileta ezivelisa ukugcwala . Ngaba ungayenza iifonti, uhlobo loonobumba, iileta, abalinganiswa kunye neesimboli engaqhelekanga kwimithombo yakho yeendaba zosasazo.
Generator Umenzi weeleta kukukopa kunye nokuncamathisela
Umenzi weeleta kukukopa kunye nokuncamathisela. Singagqiba kwelokuba ngoonobumba abaguquleli awuzifumani ngokwabo iifonti ngokwabo, ukuba nje ngoonobumba be-Unicode.
Converter Iileta eziguquguqukayo zokuguqula iileta
Ke ngalo mvelisi iileta eziJongayo azenzi iifonti, sebenzisa Iimpawu ze-Unicode onokuyisebenzisa kwi I-Instagram, iTwitter, iPinterest, iFb, iTumblr, iWhatsapp, iTikTok...
Umvelisi 🔥 Umatshini wokukhuphela iileta
1 [Iileta ezivelisa iileta] How️ Ungazisebenzisa njani iifonti zesiko?
3 Umenzi weeleta ezantsi
4 Ator Umatshini wokuvelisa iileta ngasemva, iifonti kunye nohlobo lohlobo
5 Generator Umenzi weeleta kukukopa kunye nokuncamathisela
6 Converter Iileta eziguquguqukayo zokuguqula iileta
7 Umvelisi 🔥 Umatshini wokukhuphela iileta